”Israel waa inay il gaar ah u yeelataa Somaliland” – Jerusalem Post oo qoray dano ay isla eegayaan Imaaraadka & Israel | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Israel waa inay il gaar ah u yeelataa Somaliland” – Jerusalem Post...
”Israel waa inay il gaar ah u yeelataa Somaliland” – Jerusalem Post oo qoray dano ay isla eegayaan Imaaraadka & Israel
(Tel Aviv) 21 Agoosto 2020 – Jeer ay is bedeleeyso muhiimadda siyaasad-dhuleed ee Gobolka Geeska Afrika, oo ay isku faraq xirteen Israel, Imaaradka, Giriigga, Qubrus iyo Masar oo ay dani ka dhexeeyso, Somaliland waxay noqon kartaa meel muhim ah, ayuu qoraalkiisa ku bilaabay Jerusalem Post.
”Somaliland waa dal yar oo ku yaalla xeebaha koonfureed ee Gacanka Cadmeed kaasoo waloow uu xornimo ku dhawaaqay 1991-kii, weli loo arko qayb ka mid ah Somalia.” ayuu qorayaa warqaadka Jerusalem Post oo raaciyey inay misna halkaasi tahay meel leh muhiimad istaraayijiyadeed iyo fursado dhaqaale iyadoo ay Israel iyo Imaaraadkuba ay fahamsan yihiin fursad ku jirta Somaliland oo ay tahay inay Quddus diiradda saarto, ayuu raaciyey isagoo Quddus ka dhigaya caasimadda Yuhuudda.
Maanta, Somaliland waa xor balse caalamiyan lama aqoonsana sida Woqooyiga Qubrus waxayna leedahay dhabba-diyaaradeedka ugu wayn Afrika oo ay Soofiyeetku dhiseen.
Somaliland ayaa isha ku haysa waxa ka soconaya Geeska. Turkey waxay saldhig wayn ku leedahay Somalia, halka Shiinuhu uu dekedaha maalgashanayo. Sidaa darteed, Somaliland waxay leedahay muhiimad istaraatijiyadeed, amaan ahaanna way dhaantaa Somalia inteeda kale.
ISRAEL ayaa diiradda saari karta Somaliland. RW Benjamin Netanyahu ayaa la kulmay Suudaan iyo Chad. Kaddib heshiiska rasmiga ah ee Imaaraadkana wuxuu u tallaabi karaa Somaliland. “Wax dhibaato ihi nagama dhexeeyaan Israel,” ayuu yiri qof Somaliland ah oo la waraystay.
Somaliland ayaa door ka qaadan karta xasilloonida Geeska iyadoo uu Imaaraadku dan ka leeyahay Jasaa’irka Suqadra oo u dhow xeebaha Somalia iyo Yaman.
Waxaa intaa dheer, Maraykanka oo doonaya saldhig uu yeesho Taliska Africom oo ku yaalla meel xasilloon, si loola dagaallamo kooxaha xag-jirka ah ee Somalia iyo Saaxil oo daroonno lagu duqeeyo, ayuu qoray SETH J. FRANTZMAN oo markaa kaddib waxyaabo badan oo ay Somalia ka wada jira sida telefoonnada lacagta lagu isticmaalo iwm ku amaanay Somaliland.
Waxaa Qoray: SETH J. FRANTZMAN
Previous articleImaaraadka oo qirtay inuu ku ”fududaaday” heshiiska Israel & 3 weji gabax oo uu durba la kulmay
Next articleMa jiraa abaal ay beesha caalamku ku leedahay dalka Somalia? (Faallo kooban)